Kwenguva yakareba kwenguva refu, ini ndanga ndichingoedza kubvunzana neakatanga mari uye nemakambani makuru emabhizimusi nekuti ndaiziva kuti ndaizokwanisa kufambisa tsono yekushandura nemakambani aive nezviwanikwa uye nguva yekutora chikamu chemusika. Gore rakapera, kekutanga, ndakafunga kushandisa matekiniki mamwechetewo andakashandisa kumakambani ane matunhu, makambani madiki… uye yakave nemhedzisiro inoshamisa mukuvandudza kwavo kwekutsvaga kwekutsvaga uye kutendeuka.
Pakati pesarudzo iri kudonhedza iyo yemukati yekugadzira mutsara uye, pachinzvimbo, kugadzira raibhurari yezvinyorwa. Tarisiro yedu haisi pa periodicity kana kuwanda kwezvinyorwa zvedu zvatinoburitsa kumutengi, ndezvekutsvaga misoro yenyaya dzinovafadza uye dzinoenderana nebhizimusi… uye kuvaka zvese zvavo zvekambani masimba uye kuvimba. nevanotarisira vatengi. Iyo nzvimbo yekutarisa inobvisa iyo kambani uye, pachinzvimbo, inoisa mutengi kana bhizinesi tarisiro pakati pechirimo.
Sei? Nekuti vashanyi vanogona kuona yavo saiti, verenga nezve kwavo maficha, uye kusaina kusaina yemuedzo account. Mazana emazano uye manomano zvinyorwa zvinogona kuwana zvimwe zvikamu, asi havasi kuzoshandura.
Pane kudaro, Agent Sauce inoshandira tsamba, blog, uye podcast inotarisa kumatambudziko uye mabhenefiti ekubudirira real estate agent. Vakaita hurukuro pamusoro penyaya dzemutemo, VA zvikwereti, kutamisirwa bhizinesi, nyika nemitero yemubatanidzwa, hupfumi hwenharaunda, staging yemumba, kupuruzira imba, nezvimwewo. Izvo zvinotariswa zvemukati zvavo hazvisi kupa matipi akawandisa anogona kuwanikwa chero kumwe kunhu; ndeyekupa hunyanzvi kubva kune zviwanikwa zveindasitiri zvinozobatsira tarisiro yavo uye vatengi kutengesa zvakanyanya uye kukura bhizinesi ravo.
Asi hazvisi nyore. Kutanga, ivo vanofanirwa kutsvagisa kuti izuva ripi muhupenyu hweamiriri uye nenyaya dzese dzavari kupokana nadzo. Ipapo, ivo vanofanirwa kuvaka hunyanzvi hwavo kana kuunza dzimwe nyanzvi kubatsira avo vanotarisira uye vatengi. Uye ivo vanofanirwa kuita zvese izvo vachiri kuramba vachikwikwidza neplatform yavo.
Nekudaro, iko kukanganisa kuri kuti ivo vari kuve sosi huru mukati meindasitiri uye vari kuvaka hukama hwakareba nevateereri. Nezve tarisiro, ivo vari kuve kuenda-kune zviwanikwa izvo zvavanochengeta kumusoro kwepfungwa nazvo kune zvavo zvemukati zvemukati. Kune vatengi, ivo vari kuvabatsira kuti vabudirire uye vafare nemabasa avo.
Uye kana tikaburitsa yakazara, yakanyatso tsvagisirwa, chinyorwa chiri nani pane chero imwe sosi, icho chinyorwa chemukati urefu chinowanzo kuve chakareba, hongu. Mune mamwe mazwi: